Hay’addaha Ammaanka Kenya oo ka digay weeraro ay Alshabaab ka fuliyaan dalkaasi – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Hay’addaha Ammaanka Kenya oo ka digay weeraro ay Alshabaab ka fuliyaan dalkaasi
Hay’addaha Ammaanka ee Kenya ayaa la geliyey Feejignaan Sare, kadib, markii warar dhinaca Sirdoonka lagu sheegay inay Dagaalamayaasha Alshabaab qorsheynayaan sidii ay Bambooyin lagu soo qariyey Shandadaha Safarka u soo gelin lahaayeen gudaha dalka Kenya.
Sida lagu soo daabacay Wargeyska Daily Nation waxay Hay’addaha Ammaanka soo bandhigeen Sawir Nin lala xiririinayo Alshabaab, oo lagu magacaabo Mustaf Ismail Hashi, kaasi oo la sheegay in ay Bolis dhar cad ah ku qabteen Bas ay ku joojiyeen Deegaanka Makongeni ee Gobalka Thika.
la helay warbixin uu kaga hadlay sidii bambooyinka shandadaha lagu soo qariyey loo soo gelin lahaa gudaha Kenya.
Warbixinta Hay’adda sirdoonka Kenya ayaa lagu xusay inay Alshabaab xeellad cusub u adeegsanayso sidii ay Kenya ku soo gelin lahaayeen waxyaabaha qarxa, waxaana Boliska iyo Gaadiidleyda looga digay inay taxadir ka qabaan Shandadaha ay wataan dadka ka soo gudbay xuduudka Kenya la wadaagto Somalia.
Mustaf Ismail Hashi, ayaa la sheegay inay saaxiib dhow yihiin Nin lagu magacaabo Ahmed Mohamed Abdullahi, kaasi oo ay bishii Maarso ee la soo dhaafay ay Boliska ka soo qabteen isagoo la socday Bas ka soo ambabaxay Degmadda Mandera, kuna soo jeeday magaalladda Nairobi.
Boliska ayaa sheegay inay Ninkaasi ku qabteen Shandad ay ka buuxeen waxyaabah qarxa.
Warbixinta ayaa lagu xusay inay bambooyinka la qabtay oo ka koobnaa maadooyinka RDX iyo TNT ee laga farsameeyo waxyaabaha qarxa ay shan jeer ka awood badan yihiin qaraxii loo adeegsaday Safaaradda Maraykanka ee Nairobi sannadkii 1998-dii.
Dhinaca kale, Sirdoonka Kenya waxy rumeysan yihiin in labada nin ee la qabtay ee Mustaf Ismail Hashi iyo Ahmed Mohamed Abdullahi la rumeysan yahay inay fulinayeen amar uu horey u siiyey Taliyihii Amniyaadka ee Alshabaab, Aadan Garaar oo lagu dilay duqeyn ka dhacday K/galbed Somalia.
Alshabaab oo la sheegay inay Waraaqo Digniin ah ku daadiyeen Degmooyin ka tirsan Kenya
Somali haysta dhalashadda Norway oo ku biiray Dacaish oo xukun lagu riday